Madadaalo Guriga Carruurta
Madadaalo Guriga Carruurta Qaab dhismeedkaan waxaa loogu talagalay carruurta inay wax bartaan oo ay ciyaaraan, taas oo ah guri gabi ahaanba madadaalo leh kana soo jeeda aabe super ah. Naqshadeeyahu wuxuu isku daray walxaha caafimaadka iyo qaababka badbaadada si ay u sameeyaan meel cajiib ah oo xiisa leh. Waxay isku dayeen inay ka dhigaan guriga carruurta raaxo leh oo diiran, oo waxay isku dayeen inay sii xoojiyaan xiriirka waaliddiinta iyo ilmaha. Macmiilku wuxuu u sheegay nashqadeeyaha inuu gaaro 3 yoolal, kuwaas oo kala ahaa: (1) agab dabiici ah iyo badbaado, (2) ka farxiyaan carruurta iyo waalidka iyo (3) meel ku filan oo lagu keydiyo. Naqshadeeyayaashu waxay heleen hab fudud oo cad oo lagu gaadho hadafka, kaas oo ah hoyga, bilowga booska carruurta.
Arbaco 10 Bisha Labaad 2021
Guriga Gudaha Muxuu yahay boos u bannaan guri? Naqshadeeyahu waxa uu aaminsan yahay in naqshaduhu ay ka timaado shuruudaha milkiilaha, gaarista nafta ilaa meel bannaan. Sidaa darteed, nashqadeeyaha ayaa ujeedsaday ujeedadooda boos ee ay u hayaan lamaanaha jecel. Labada milkiileba waxay jecel yihiin agabyada iyo xallinta xalka qaraabada dhaqanka Japan. Iyaga oo matalaya xusuusta udhaxeysa maskaxdooda, waxay go’aansadeen inay adeegsadaan dhir kala duwan oo qoryo ah si ay u abuuraan guri nafley ah. Sidaas awgeeda, waxay sameeyeen 3 yool oo loo wada dhan yahay ee gurigan ugufiican, oo ahaa (1) jawiga xasilloon, (2) Goobaha dadweynaha ee dabacsan oo qurxoon, iyo (3) goobo gaar ah oo raaxo leh oo aan la arki karin.
Guri Loogu Talagalay Xusuusta
Talaado 9 Bisha Labaad 2021
Guri Loogu Talagalay Xusuusta Gurigan wuxuu ku gudbiyaa sawirrada guriga alwaax alwaax ah iyo keydka la is dhaafsaday ee lebenkii cad. Nalku wuxuu ka socdaa meelihii ay lebenkii cadaa ku yiil guriga, taas oo u abuureysa jawi gaar ah macaamiisha. Nashqadeeyuhu wuxuu adeegsadaa dhowr qaab si uu u xalliyo xaddidaadda dhismahan loogu talagalay hawo qaboojiyeyaasha iyo meelaha keydinta. Sidookale, iskudhaji agabyada xusuusta macmiilka oo soo bandhig qaab diiran oo qurux badan oo qaab dhismeedka ah, adigoo isku xiraya qaabka gaarka ah ee gurigan.
Isniin 8 Bisha Labaad 2021
Guriga Gudaha Guri warshadeed oo leh qalab diiran. Gurigan wuxuu u diyaariyaa dhowr howlood macaamiisha inay kor u qaadaan tayada nolosha. Nashqadeeyaha wuxuu isku dayay inuu ku xiro tuubooyinka goob kasta iyo isku darka alwaax, bir iyo bir dhanbaal ah si loo muujiyo sheekada nolosha macaamiisha. Lama mid aha qaabka caadiga ah ee warshadaha, aqal galkan ayaa kaliya soo gala midabyo yar yar wuxuuna diyaariyaa meelo badan oo wax lagu kaydiyo.
Sabti 6 Bisha Labaad 2021
Qolka Labiska Sopron Basket waa koox kubbadda koleyga dumarka ah oo xirfad u leh fadhigoodu yahay Sopron, Hungary. Maadaama ay yihiin mid ka mid ah kooxaha ugu guulaha badan dalka Hungary oo leh 12 koob oo koob qaran ah isla markaana ku guuleysta booska labaad ee Euroleague, maamulka kooxda ayaa go'aansaday inay maalgashadaan qol kuyaala cusub si ay u yeeshaan xarun sharaf badan halkii magaca kooxda, ku habboon baahida ciyaaryahanka. sifiican, u dhiiri geli oo kor u qaad midnimadooda.
calendar 2013 “Module” Kalandarka Isniin 1 Bisha Saddexaad
calendar 2013 “Town” Kalandarka Axad 28 Bisha Labaad
calendar 2013 “Rocking Chair” Kalandarka Sabti 27 Bisha Labaad
Madadaalo Guriga Carruurta Guriga Gudaha Guri Loogu Talagalay Xusuusta Guriga Gudaha Guriga Gudaha Qolka Labiska